Flirtymania Affiliate Program ကိုမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Affiliate Program ကိုမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မည်သူမဆို program ကိုဆက်သွယ်နိုင် - သင်လိုအပ်သမျှတစ်ခုဖိတ်ကြားချက်ကိုသို့မဟုတ်အထူးအကောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအသင့်လျော်တဲ့အပိုင်းအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလင့်များနှင့် codes တွေကိုရယူပါ။ ထိုအခါဝင်ငွေကိုစတင်ရန်!
သငျသညျလူမှုရေးပိုက်ကွန်ကနေတစ်ဆင့်သင့်သူငယ်ချင်းများဖိတ်ခေါ်ရန်ဒါမှမဟုတ်ချက်တင်များအတွက်ကုဒ်တွေနဲ့ website တစ်ခုဖွင့်ခြင်းရှိမရှိဒါဟာအရေးမထားဘူး။ မဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေး link ကိုကိုပရိုဂရမ်ထဲမှာ app ကိုပါဝင်သူမှတဆင့်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
သငျသညျဖိုရမ်များ, လူမှုရေးပိုက်ကွန် site ကိုကြော်ငြာတွေကိုသုံးနိုင်သည် - ပစ်မှတ်အသွားအလာနှင့်အတူမည်သည့်သတင်းရင်းမြစ်ကြိုဆိုကြသည်။ ဆွဲဆောင်မှုနဖူးစည်းစာတမ်းတွေကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးနှုန်းများပစ္စည်းများကိုသုံးပါ။
ဒါ့အပြင်သင်သည်ထိုဆောင်ပုဒ် post ကို code ကိုကိုက်ညီသောပေါ်ပြူလာက်ဘ်ဆိုက်ရှိပါက။ ဒါအားလုံးအသုံးပြုသူများသည် '' ဝယ်ယူမှုအမြတ်အစွန်းပါလိမ့်မည်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်မည်သည့်နိုင်ငံကနေအသုံးပြုသူများကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထပ်တိုးရန်အပလီကေးရှင်း 16 ဘာသာစကားများသို့ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်:
ပထမဦးဆုံးအရာခပ်သိမ်းကိုဒင်္ဂါးပြားအဖြစ်မိတ်ဖက်အကောင့်ဝင်, ထို့နောက်သင် $ 1 6000 ဒင်္ဂါးပြား၏လဲလှယ်မှုနှုန်းမှာသူတို့ကိုမရောင်းနိုင်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Bitcoin နှင့် Yandex ပိုက်ဆံအိတ်လည်လည်ရုပ်သိမ်းတောင်းဆိုမှုများကိုလက်ခံရရှိသည်။
ယခုအချိန်တွင် Yandex ယူကရိန်းမှလွှဲပြောင်းထိန်းသိမ်းရန်ပါဘူးသတိပြုပါ!
အနိမ့်ဆုံးပေါင်းလဒ်သည် ၁၀ ဒေါ်လာသာဖြစ်ပြီး၊ သင်သည်အချိန်မရွေးတောင်းဆိုမှုများကိုပေးပို့နိုင်သည်။
များသောအားဖြင့်ပိုက်ဆံ 1-2 ရက်အတွင်းနီးပါးရှိပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ထံစာရေး,5ကာလ၏ကာလ diring ဘာမှကိုလက်ခံရရှိကြပြီမဟုတ် Iif: support@flirtymania.plus
အဘယ်သို့ငါတစ် Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်ဖန်တီးသလဲ?
တစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ဖန်တီးငွေသားထုတ်ယူ, ဤဆိုဒ်များ၏တဦးတည်းမှာ register to:
ငါအဘို့အအကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲ get သလဲ?
သငျသညျတွဲဖက်အသုံးပြုသူများနှင့်တွဲဖက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဝင်ငွေရဲ့ 10% ကဝယ်ယူအားလုံးဒင်္ဂါးပြားပေါ်မှာ 30% comission ရလိမ့်မယ်